जोखिम बढ्यो, शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ !! एक पटक पढी शेयर गरौ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/जोखिम बढ्यो, शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ !! एक पटक पढी शेयर गरौ !
जोखिम बढ्यो, शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ !! एक पटक पढी शेयर गरौ !
लक`डाउनको अवधि ल`म्बिँदै जाँदा बिहान र साँझ हिँड्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । साँघुरा बाटामा समेत हिँड्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि जोखिम थपिएको चिकि`त्सकहरू बताउँछन् । मानव स्वास्थ्यका लागि व्यायाम अतिआवश्यक पर्दछ ।
चिकि`त्सकहरूले पनि बिहान बेलुकी हिँड्न सुझाव दिने गर्दछन् । यतिबेला लकडाउनका कारण दिनभर घरमा खाएर बस्ने मात्रै गर्दा विभिन्न रोग लाग्न सक्ने जोखिम त्यतिकै छ ।
भरतपुर अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा प्रकाश खतिवडा भिडमा बाहिर नहिँड्न सुझाव दिनुहुन्छ । तीन मिटर फरकमा गुण`स्तरीय मास्क लगाएर हिँड्न सकिने भए पनि त्यो सबै व्यवस्था`पन शहरी क्षेत्रमा सम्भव नहुने भएकाले जोखिम नमोल्न उहाँको सुझाव छ । घरमा योग गर्न सु`झाव दिँदै खति`वडाले अहिलेको अवस्थामा सबै सचेत हुनुपर्ने बता`उनुभयो ।
साँघुरा सडकमा गाडी आउँदा बीचको भाग छोड्नु पर्छ । छेउबाट भिड गरी हिँड्दा उच्च जोखि`मको सम्भावना रहन्छ ।लक`डाउनको समयमा विभिन्न बाहानामा मध्यपुरथिमि शङ्ख`धर`चोकमा हिडडुल गर्ने सर्वसाधारणलाई बिहान सम्झाउँदै सुरक्षाकर्मी । वरिष्ठ फिजिसियन डा कालिदास अधिकारी सामाजिक दूरी कायम गरेर तीन पत्रे (ट्रिपल लेयर) सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दा कम जोखिम भए पनि भिडमा नहिँड्नु नै उपयुक्त भएको बताउनुहुन्छ ।
अहिले बजारमा त्यस्ता मास्क पाउनै मुस्किल भएको भन्दै यो जोखिमको समयमा घरमै व्यायाम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । पहाडी र खाली ठाउँमा हिँडडुल गर्न र सामाजिक दूरी कायम गरी खेतमा काम गर्न सकिए पनि शहरी क्षेत्रमा नहिँड्न उहाँको सुझाव छ ।
अहिले जिल्ला`को शहरी क्षेत्रमा बिहान सबेरै देखि र साँझ हुलका हुल मानिस हिँड्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा भन्दा धेरै मानिस हिँड्ने गरेको देखिन्छ । मास्कविना र साधारण कप`डाको मास्क`मा हिँड्डु`ल गरेको पाइन्छ । सा`माजिक दूरी कायम गर्न कठिन छ । नजिकैबाट हिँड्नेले खोक्दा, थुक्दा, हाच्छ्यु गर्दा यसको जोखिम हुने अधका`रीको भनाइ छ । घरमै बस्ने र व्या`याम गरेमा सबै रो`गबाट बच्न सकिने चिकित्स`कको सुझाव छ ।
कुलमान घिसिङका पिताको नि`धन